Dhito Patra :: उपलब्धिमुलक इन्स्योरेन्स हुन जरुरी छ
उपलब्धिमुलक इन्स्योरेन्स हुन जरुरी छ
Interviewee: Bibek Jha
मुलुकको ठूलोसंख्या अझै पनि बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । बीमाले आममानिसको जीवनमा आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भएकाले बीमा मानिसको जीवन, पेशा, व्यवसायको सारथी नै हो ।
पछिल्लोपटक नेपालमा नयाँ–नयाँ बीमा कम्पनी खुल्दै गएका छन् । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा पनि बढेर गएको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स मुलुकमा सञ्चालित जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये अग्रणी भूमिकामा रहेको बीमा कम्पनी हो । यस कम्पनीले बिमित तथा लगानीकर्ताहरुलाई उच्च प्रतिफल दिदै आइरहेको छ ।
नेपालको उत्कृष्ट बीमा कम्पनीहरु मध्येको एक मानिने यस कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व विवेक झाले गर्दै आएका छन् । विगत ७ वर्षदेखि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका झासँग बीमाको वर्तमान अवस्था र चुनौतीका विषयमा आर्थिकन्यूज डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नेपालको बीमा क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
बीमा क्षेत्रमात्रै नभएर जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्दा पनि सिक्दै जाने कुरा हो । मैले पनि त्यसरी नै क्रमशः सिक्दै जाने हो । आफूलाई यो क्षेत्रमा सात वर्षदेखि काम गर्ने मौका पाएको छु । कुनै पनि देशका मान्छे आर्थिक जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यो इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
इन्स्योरेन्स क्षेत्र भनेको जोखिम व्यवस्थापन, बचत र यसलाई लगानीको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यो क्षेत्र आगामी दिनमा चाँडै लगानीको कुरा पनि आउने देखिन्छ । किनकी अहिले जनसंख्या पनि बढ्दै छ । त्यस्तै प्रतिस्पर्धा त उच्च रुपमा बढेको छ, यसले गर्दा पनि अबका दिनमा इन्स्योरेन्सलाई लागानीको रुपमा पनि नेपालीले महशुस गर्न सक्छन् ।
बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ?
हरेक नेपालीले बीमा के हो र यसको फाइदा केका लागि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । अहिले बीमा क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको बीमा चेतना नै हो । मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भने विकसित मुलुकमा औसत उमेर र प्रतिव्यक्ति आय उच्च रहेको हुन्छ ।